သံသေတ္တာအတွင်း ၇ နှစ်သမီးနှစ်ဦး ပိတ်မိပြီး သေဆုံး by popolay.com
ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် တစ်နေ့ကို လူ(၂)ဦးနှုန်းခန့် သေဆုံးနေ
မူးယစ်ဆေးဝါးချက်လုပ်တဲ့ ထိန်းချုပ်ဓာတုဗေဒကုန်ကြမ်းပစ်္စည်းတွေ အိန္ဒိယ နယ်စပ်မှ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နေ
မြို့တော်ဝန်အား ပြည်သူရွေးချယ်နိုင်ခွင့်အပါအ၀င် အကြံပြုချက်(၁၆)ချက် လွှတ်တော်အားပေးပို့မည်
ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် ရုရှားတွင် ခွေးတွေကို ဈေးကောင်းပေးပြီး သုတ်သင်
ပရိသတ်ရဲ့ဆန္ဒကို ငြင်းမိလို့ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရတဲ့ အဆိုတော်
ဘန်ကောက် အနှိပ်ခန်းမှာ အဓ္ဓမပြုကျင့်ခံရသူ အမျိုးသမီးရဲတိုင်ကြား
ထိုင်းနိုင်ငံက လူသတ်မုဒိန်းမှုများနဲ့ လိပ်ကျွန်း (သို့) သေမင်းကျွန်း
မိတ္ထီလာ-ကျောက်ပန်းတောင်းကားလမ်း ဘုရာဖူးယာဉ် တိမ်းမှောက်
လယ်တောတဲမှာ အမျိုးသားတစ်ဦး သေတမ်းစာနဲ့အတူ ကြိုးဆွဲချသေဆုံး
စကားများရာမှ သားဖြစ်သူကို ဓါးနဲ့ခုတ်ပြီး မိမိကိုယ် ကြိုးဆွဲချသေတဲ့ဖခင်
လူကုန်ကူးခံရသော အသက် ၁၅ နှစ်သမီးအား ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့
အုပ်စုလိုက် အတွဲပြောင်းပြီး လိင်ဆက်ဆံနေချိန် ရဲများဝင်ဖမ်း
ဆင်းမ်ကတ်နှစ်ခုထည့်သုံးနိုင်မည့် iPhone အသစ် မကြာမီလာတော့မည်
ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ထူးဆန်းစွာ အစိမ်းရောင်သန်းနေမည့် လကို မြင်တွေ့ရမည်
ထိုင်းရဲကို ပြန်နှိပ်ကွပ်တဲ့ မြန်မာပြည်က ဘောစိရဲ့သား
လီနိုမန်ကာဒ်ဖြင့် ခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောစာတမ်း ဆရာပိုင်ဟိန်းကျော်
တစ်ရက်လျှင် ကော်ဖီ ၃ ခွက်သောက်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး
နားကြပ်တွေက သင့်ရဲ့အကြားအာရုံကို ထိခိုက်စေနိုင်တာ သိပါရဲ့လား..?
ဦးနှောက်နဲ့ မှတ်ဉာဏ်ကျဆင်းမှုကို လျော့ကျစေမည့် အစားအစာများ
ကားမှာတင်ကျန်နေတဲ့ ရေဂျိုးများအလွယ်တစ်ကူ ဖယ်ရှားနည်း
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာပြီလား..? ဘဝမှာ ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ..
၁၆ နှစ်အောက်ကလေးများအား ခွန်အားပြည့်အချိုရည် ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်
ကျန်မာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုအဆင့် လျှော့ချခံလိုက်ရတဲ့ Milo(မိုင်လို)
ကိုရီးယားရောက် ရွှေမြန်မာတွေကို ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အဆိုတော်အိမ့်ချစ်
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ Myanmar Idol ဝေဖန်ခံနေရ
၂၀၁၈ ခုနှစ် အော်စကာဆုရစာရင်းများ
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပွဲစဉ်အချို့အား လုပ်ပွဲဟု အာရှဘောလုံးအဖွဲချုပ် သံသယရှိ
ထိုင်းလိဂ်တွင် အကောင်းဆုံးအားကစားသမားဆု ထပ်မံရရှိခဲတဲ့ အောင်သူ
ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး နပမ်းချံပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်သားကလေးငယ်
သံသေတ္တာအတွင်း ၇ နှစ်သမီးနှစ်ဦး ပိတ်မိပြီး သေဆုံး
17 Jul 2017 224 Views
မိခင်ဖြစ်သူက သမီးပျောက်၍ တစ်ရွာလုံးအနှံ့လိုက်ရှာခဲ့ရာ သံသေတ္တာထဲတွင် သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးနဲ့အတူ ပိတ်မိသေဆုံးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု မကွေတိုင်း ဆားတိုင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု ဝါဂွမ်းကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇာလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက မိခင်ဖြစ်သူ မအေးနွဲ့ကြည် ဈေးဆိုင်သိမ်းပြီးအပြန် အိမ်တွင် တစ်ယောက်ထဲထားခဲ့ရသော ၇ နှစ်အရွယ် သမီးငယ်ကို မတွေ့သဖြင့် အိမ်နီးချင်းများကို မေးမြန်းရာ ညနေ ၃ နာရီခန့်က အခြားသူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့် အိမ်ရှေ့တွင် ဆော့ကစားနေတာ မြင်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း လက်ရှိတွင် ပျောက်နေသဖြင့် ရွာလူကြီးများထံ ရှာဖွေပေးရန် အကူညီတောင်းခဲ့သည်။
ရွာလူကြီးများက ကလေးပျောက်နေကြောင်း အသံချဲ့စက်နှင့် ကြေညာပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ် ရွာထဲမှလူတစ်ဦးက ပျောက်နေတဲ့ ကလေးဓါတ်ပုံရရင် ပိုကောင်းတယ်ဟု ဆိုသဖြင့် သမီးဓါတ်ပုံယူရန် အိမ်သို့ပြန်ကာ အိမ်ခန်းထဲရှိ သံသေတ္တာကို ဖွင့်လိုက်ရာ သေတ္တာထဲတွင် သမီးနှင့်အတူ အခြားရွယ်တူ မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ သေဆုံးနေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
အလျား ၃၄ လက္မ အနံ ၁၈လက္မ၊ အမြင့် ၁၄ လက္မရှိသော သံသေတ္တာအတွင်းသို့ ကလေးငယ်နှစ်ဦး ဝင်ရောက်ဆော့ကစားရာမှ ရုတ်တရက်သေတ္တာပိတ်မိပြီး သေတ္တာပတ္တာများ ချိတ်မိကာ ဖွင့်မရပဲ အထဲတွင် အသက်ရှုမွန်းကာ သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများက ယူဆထားကြသည်။
သမီးကိုရိုက်နှက်ရာမှ သေဆုံးခဲ့မှုကြောင့် အလောင်းဖျောက်ခဲ့တဲ့မိခင်
မိတ္တီလာမြို့ တောမကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် ရှေ့ ထိတ်လန့်ကြေကွဲစရာ ယာဉ်တိုက်မှု
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ YBS ပေါ်ကခါးပိုက်နှိုက်တွေ
တိုက်ခေါင်းမိုးများပေါ်တွင် သက်စွန့်စံဖျားဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးသူ လူငယ်သေဆုံး(ရုပ်သံ)
ဘ၀တက်လမ်းအတွက် အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ
မိန်းကလေးတွေကို လက်သရမ်းလို့ အသက်နဲ့လဲခဲ့ရတဲ့ ထိုင်းသင်္ကြန်
မနှစ်ကသင်္ကြန်ရန်ကြွေးကို ဒီနှစ်အတိုးပါ​ ပေါင်းဆပ်လိုက်တဲ့ ၁၄ နှစ်သား